Uhulumeni wakuleli ugxeke abahlasele eParis | News24
Uhulumeni wakuleli ugxeke abahlasele eParis
Johannesburg - Uhulumeni waseNingizimu Afrika ugxeke isehlakalo sokuhlasela esenzeke emahhovisi ephephabhuku laseFrance iCharlie Hebdo okushone kusona abantu abangu-12, kusho uMnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba ngoLwesine.
"Uhulumeni waseNiningizimu Afrika njengamanye amazwe uyasigxeka isenzo esiwubulwane sokuhlaselwa kwezintatheli kanye namalungu omphakathi ngoLwesithathu eParis, eFrance,” kusho uClayson Monyela esitatimendeni.
"Ukuhlaselwa kwezintatheli kanye namalungu omphakathi kuphambene nomthetho wamazwe omhlaba.”
Funda nalolu daba: I-video yokudubulana okwenzeke eParis.
Abezindaba ngoLwesine bacaphune uNdunankulu waseFrance uManuel Valls ethi sekuboshwe abantu abaningi njengoba iziphathimandla zithungatha okungenzeka ukuba bayingxenye ye-Al Qaida.
UMonyela uthe: "INingizimu Afrika njengamazwe omhlaba nayo ayihambisani nezenzo zobushokobezi futhi izoqhubeka nokweseka imizamo yokulwisana nabo.”
Uhulumeni waseNingzimu Afrika uzwelana kakhulu nomphakathi waseFrance, uhulumeni wakhona kanye nemindeni yezisulu.